နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၂) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on November 13, 2014 at 13:29 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲက ကြားဖူး၊ ပြောဖူးတဲ့ ထသွားလာသွား စကားပြော တွေကို နည်းနည်း အတွင်းကျကျ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူ ရိုးစင်းတဲ့ စကားပြော တွေဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျနဲ့ ပြောတတ်တော့ ပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ပါ။ ဒီနေ့ အပိုင်း (၁၂) မှာ ဂိမ်းတွေ အကြောင်းဆွေးနွေးရာမှာ သုံးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
George : Say Joe do you play bridge?
Joe : No, I don't play any card games. But I know how to play chess. How about you, George?
George : Well, I happen to be one of the best chess players around.
Joe : OK. Let's play, then. We'll see who's the best!
George နဲ့ Joe တို့ စကားပြောတဲ့ အကြောင်းကို စိတ်နဲ့ နားထောင် ကြည့်ရအောင်။
George က "Say Joe do you play bridge?" လို့မေးလိုက်တယ်။ Joe က "No, I don't play any card games." လို့ဖြေလိုက်တယ်။
အင်္ဂလိပ် စကားပြောမှာ attention-getter လို့ခေါ်တယ်။ နားထောင်သူရဲ့ အာရုံကို ရဖို့ ပြောတာပါ။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကို အခြေခံထားတဲ့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်တို့ စုံထောက်ဦးစံရှားတို့ ဝထ္တု တွေ ဖတ်ဖူးရင် အဲဒီထဲက ဇာတ်ကောင်တွေ "အိုင်ဆေး"၊ "အိုင်ဆေး" (I say..) ဆိုပြီးစကားပြောကြတာ သတိထားမိမှာပါ။
I don't play any card games.
Compound noun ဖြစ်တဲ့ card အပေါ်မှာ stress ထည့်ပြောတယ်။ ဒါကတော့ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီစကားပြောမှာတော့ card အပေါ်က stress က ဘာကိုပြောချင်လည်းဆိုရင် Joe က ဖဲမကစား ပေမဲ့ အခြား ကစားနည်းတွေ ကစားတတ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါ။
တစ်ခုခု လုပ်တတ်တယ် လို့ပြောရင် know how to ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးကြတယ်။
Know how to = be capable of/ have the skill to do something
ဒီမှာဆိုလိုတာက "မင်းရော ကစားတတ်လား" လို့မေးတာပါ။ "Do you play chess, George?"
One of the best chess players around.
"ဒီတစ်ဝိုက်မှာတော့ အတော်ဆုံး ကစားသမားပေါ့။" လို့ဆိုလိုတာ။
Chess player က compound noun ဖြစ်ပြီး chess အပေါ်မှာ principal stress ထည့်ပြောတယ်။
မေးခွန်းမေးခြင်း (Questions, questions? by Guy Perring)
Similes by Daw Tin Nwai Win